आँसुले रूझेको अँगेनो- दसैं विशेष - कान्तिपुर समाचार
दुधसँगै ठुलीआमाको चर्को रिस पोखियो । अघि भोकले रोएको भाइ पनि अब पोलेको पीडाले झन् रून थाल्यो । आमा यतिबेला पनि केही नबोली बसिरहनुभएको थियो ।
आश्विन २८, २०७८ अस्मिता बादी
काठमाडौँ — यतिबेला काठमाडौँ कलङ्कीमा ‘रारा एयर सस्पेन्सन’को क्याबिनमा छु । मन एकतमासले उजाडिएको छ । वरिपरिको वातावरण मान्छेको भीडले गुम्सिएको छ । कुममा कुम जोडेर हिँडिरहेका यी मान्छे देख्दा लाग्छ, हजारौँ माइलको दुरी लिएर पनि यी सँगसँगै हिँडेका छन् ।
समीपमा छन् तर कति अलग्गिएका छन् । भीडमा छन् तर एक्लो र बेचैन छन् ।
यद्यपि म पनि यही भीडको एक यात्री न हुँ । मेरो मन पनि कतै टाढा पुगेको छ आज । भावनाहरू मनको आकाशमा उड्दैछ । बेसरी भत्किएको छु स्मृतिदंशले ।
यसपालि म गाउँ जाँदैछु तर मनखुशी भएर घर गइरहेकी छैन । बाध्यता के हो भने चाहेर पनि म घर जान सक्दिनँ । तर, सामुन्ने दसैँ भनिने एक चाड छ । उत्सव छ । यसलाई जसरी पनि ‘मनाउनुपर्ने’ लोकाचारले गर्दा म कतै गइरहेको छु । वा भनौँ जानुपरेको छ ।
गाडी थानकोटको ओरालै–ओरालो बत्तिएको छ । बाहिर बाक्लो अँध्यारोले ढाकेको छ । सडकैभरि रातको अँध्यारो चिर्दै दौडेका गाडीका झिलिमिली बत्ती छन् । तर मनको आकाशमा उही अन्धकार व्याप्त छ ।
यतिकैमा बसमा बजिरहेको खुमन अधिकारी र विष्णु माझीको दसैँ गीतले मेरो ध्यान खिच्यो । गीतले भन्छ, ‘फेरि आयो दसैँ र तिहार नि, मनै बिगार्नी !’
गीतको ‘फिमेल भर्सन’ सुन्दा लाग्छ यसले मेरै मनको व्यथा बोलिरहेको छ । यत्तिकैमा म धेरै पहिलेको कुनै एक साँझतिर हराउन पुग्छु ।
त्यो साँझ रेडियोछेउ आमा एक्लै बसिरहनुभएको थियो । सायद् गीत सुन्दै हुनुहुन्थ्यो वा रेडियो यत्तिकै बजाइएको मात्र थियो । भाइ आमाको छेउमा आफ्नै सुरमा खेलेर बसिरहेको थियो । मचाहिँ चुलोमा दाउरा राखेर आगो फुक्दै थिएँ ।
त्यो दिन हामी सबैलाई निकै भोक लागेको थियो । आमाले आगो बालेर खाना पकाउने सुरसार नगरेपछि म आफै भात पकाउन तम्सेर आगो फुक्न थालेको थिएँ । यो देखेर आमाले मलाई र भाइलाई ठूलोबुबाको घरमा गएर आउन भन्नुभयो । तर त्यतिबेला भाइले हिँड्न मानेन ।
सायद् उसको पोलेको घाउ निकै दुखेको थियो त्यो दिन । तर उसको जिद्दी आमासँग धेरै टिकेन । हामी ठूलोबुबाको घरको बाटो झरिसकेका थियौँ ।
त्यहाँ पुग्न करिब बीस मिनेटको जङ्गलको बाटो हिँडेर जानुपर्थ्यो । आमाले यसरी कहिले पनि अबेर भइसकेपछि हामीलाई कतै जान दिनुहुँदैनथ्यो तर त्यो दिन किन हो हामीलाई उहाँकै आदेशमा ठूलोबुबाकहाँ पठाउनुभयो ।
जब त्यहाँ पुग्यौँ ठुलीआमाले झर्को मानेर गाली गर्नुभयो । ‘फेरि किन आयौ यतिबेला’ भनेर सोध्नुभयो । हामीले आमाले पठाएको भन्यौँ । तर उहाँले हाम्रो कुरालाई वास्ता नगरी उहाँकै ठूली छोरीको साथ लगाएर घरतिरै फर्काइदिनुभयो ।
बाटोभरि हामी बाबाको कुरा गर्दै गयौँ । तर बाबा आउने, नआउने टुङ्गो थिएन । दसैँसम्म आइपुग्छु भनेर उहाँ घरबाहिर जानुभएको थियो ।
तिथिमिति सम्झिँदा आज थाहा भयो, त्यो २०६४ सालको दसैँ रहेछ । पहिलोपटक फर्किएको केही दिनपछि हामी फेरि ठूलोबुबाको घर गयौँ । बिहान त्यहीँ टीका लगाएर फर्कियौँ । ठुलीआमाको स्वभाव निकै रूखो भएकाले उहाँले पूजापाठ नगरी खाना खान दिने कुरै भएन ।
टीका लगाइसके पनि हामीले केही खान पाएनौँ । यता अबेरसम्म भोक कुर्न नसकेर भाइ रून थल्यो । भाइ रोएको देखेर ठुलीआमाले चुलोमा उम्लिरहेको तातो दूध भाइको थालमा खनाइदिनुभयो । स्टिलको धारिलो बिट गरेको थालमा कति नै दूध अट्थ्यो र ! ठुलीआमाले कराइ नै थालमा घोप्टाइदिँदा भाइको हात बेसरी पोल्यो । उसले थालबाट हात छोड्दा दूध पनि भर्खरै गोबरले लिपेको भुइँभरि पोखियो ।
दूधसँगै ठुलीआमाको चर्को रिस पोखियो । अघि भोकले रोएको भाइ पनि अब पोलेको पीडाले झन् रून थाल्यो । आमा यतिबेला पनि केही नबोली बसिरहनुभएको थियो ।
घर पुग्दा निकै अँध्यारो भइसकेको थियो । आमा सानो भाइलाई काखमा लिएर आँटीमा बस्नुभएको थियो । (गाईवस्तुको लागि बनाएको गोठमा छानो हाली दाउरा र पराल सुरक्षित राख्न बनाइएको ठाउँलाई आँटी भन्ने चलन छ)
हामी लिस्नो चढेर आँटीमा उक्लियौँ । त्यहाँ रहेको चुलोमा आगो नबलेको प्रष्टै देखिन्थ्यो । दिनभरिको थकान र भोकले मलाई झनक्क रिस उठ्यो । आमालाई ठूलो स्वरमा कराउँदै भनेँ, ‘अहिलेसम्म खाना किन नपकाएको ?’
सायद्, आमासँग जवाफ थिएन । उहाँ भाइसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो । मलाई ध्यान नदिएको देखेर उहाँको नजिकै गएँ । यतिबेला पो उहाँ किन नबोली बसेको भन्ने कुरा बुझेँ । उहाँ त रोइरहनुभएको रहेछ ।
आमाका आँखाबाट बलिन्द्र आँशु निरन्तर बगिरहेको थियो । कतै मैले नै पो चित्त दुखाएँ कि भनेर म पनि रून लागेँ । फेरि आमालाई कि रूनुभएको भनेर सोध्न पनि सकिनँ ।
भाइ र म एकअर्कालाई हेरिरहृयौँमात्र । कोही कसैसँग बोलेका थिएनौँ । वातावरण एकछिन मुर्दाघरजस्तै शान्त भएको थियो ।
साँझ बढ्दै जाँदा पो याद आयो, हामीले जस्तै आमाले पनि कति दिनदेखि केही खानुभएको छैन । यति सोचिसकेर म चामलको बोरा राखेको ठाउँतिर आफ्ना आँखा दौडाउन थालेँ । तर चामल राख्ने ठाउँको बोरालाई हावाले उडाएर अर्को कुनामा पुर्‍याइसकेको थियो ।
जतिजति चामलको बोरा आधी हुँदै गयो त्यति नै हाम्रो पेट पनि आधी हुँदै गएको पो रहेछ । दसैँको दिन थियो, निधारभरि अक्षता थियो, तर पेट बिहानैदेखि खाली । अझ आमाको त कति दिन पहिलेदेखि भोको थियो ।
मैले अन्दाज गरेअनुसार आमाले हामीलाई ठूलोबुबाकोमा पठाउनुको कारण पेटभरि खाना खान पाइन्छ भनेर हो । तर ठुलीआमाले आँगनको डिलैबाट फर्काइदिइन् । यही यता भाइलाई तातो दूधले पोलेको थियो ।
हाम्रो अगाडि रोइरहन आमाको मनले दिएन । यसैले बाबा भोलि छिट्टै आउनुहुन्छ भनेर सान्त्वना दिँदै हामीलाई सुत्नको लागि ओछ्यान तयार पार्नुभयो । सधैझैँ आमा सानो भाइ, अर्को भाइ र म लस्करै भुइँमा पल्टियौँ । भाइहरू चाँडै निदाए तर म निदाउन सकिनँ । यतिकैमा आमाका गालासम्म हात पुर्‍याउन आँट गरेँ । त्यहाँ तातो आँशु बगिरहेको प्रष्ट थाहा हुन्थ्यो । त्यो दिन पो मैले महसुस गरेँ, आँशु पनि तातो हुने रै’छ ।
उम्लेको तातो दूधभन्दा पनि तातो । निकै पोल्ने रहेछ आँशुले जति आगोले पोल्दैन ।
त्यो दिन मात्र होइन, हाम्रो चुलो अरू कयौँ दिन नबलेको याद छ मलाई । तर आमा यति धेरै रोएको पहिलोपल्ट देखेको थिएँ । आमाको आँशुले मेरामा पहिरो जाँदै थियो, छ र पनि म मौन छु ।
चुलो त कति निभ्यो तर आमाले जीवनको हिम्मत भने निभ्न दिनुभएन ।
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७८ २०:१९
काठमाडौँ — खाना गएर जम्मा हुने थैलोलाई हामी आमाशय भन्छौं त्यहाँबाट बिस्तारै खाना सानो आन्द्रामा जान्छ । खाना बस्ने ठाउँमा सुन्निने, घाउ हुने, अल्सर हुनेलाई मेडिकल भाषामा ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो खाना खाने बानी नै हो ।
धेरै चिल्लो पिरो, तातो चिजहरु, भुटेको तारेको तथा रक्सी जस्ता खानेकुरा सिधै गएर यहीँ बस्छ । यदि खानामा खराब चिज छ भने खाना बसेको ठाउँमा घाउ बनाउने नै भयो । त्यसैगरी पेनकिलर तथा एन्टिबयोटिक्सको प्रयोगले पनि ग्यास्ट्रिक हुने सम्भावना हुन्छ । सबै औषधिले त गराउँदैनन् तर, आफू खुसी किनेर खाएका औषधिले भने समस्या गराउन सक्छ ।
खाँदा दुखाइ कम हुने भएपनि चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि सेवन गर्दा भित्र घाउ बनाइरहेको हुन्छ । अर्को मानसिक तनावले पनि ग्यास्ट्रिक हुनसक्छ । त्यसैगरी एचपाइलरी ब्याकटेरियाले पनि ग्यास्ट्रिक गराउँछ । ग्यास्ट्रिकको समस्या के कारणले गर्दा भएको हो त्यसको निदान गरेर उपचार गर्नुपर्छ ।
कस्ता हुन सक्छन् लक्षण?
पेट पोल्ने, पेटको माथि एकनासले पोल्ने, खाली पेटमा भन्दा खाना खाएपछि पोल्ने, पेट फुल्ने, वाकवाक लाग्ने, अमिलो पानी आउने आदि लक्षणहरु ग्यास्ट्रिकका हुन सक्छन् ।
घाउ नै भयो भने अल्सर भएको मानिन्छ । अल्सर भएपछि निरन्तर अत्यधिक दुखाइ हुन्छ उल्टी हुन्छ । अल्सरबाट घाउ भएर रगत बग्न सक्छ । रगत उल्टी भयो भने रगत दिसामा पच्दै गइ कालो दिसा भएर निस्कन्छ । यो खालको भने खतरनाक लक्षण हुन् यसमा तुरुन्त उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।रगत बगेर रगतको कमी हुन सक्छ ।
अल्सरबाट आन्द्रामा प्वालै पर्‍यो भने अत्यधिक पेट दुख्छ। तुरुन्त अस्पताल गइहाल्नुपर्छ । लामोसमयसम्म ग्यास्ट्रिक हुने फेरि ठिक हुने फेरी ग्यास्ट्रिक हुने पनि हुन्छ । क्यान्सरको हकमा ग्यास्ट्रिकले नै क्यान्सर गराउने होइन तर ग्यास्ट्रिक गराउने कारणहरुले नै क्यान्सर गराउन सक्छन् ।
कसरी सजग रहने?
खानामा ध्यान दिनुनै महत्त्वपूर्ण हो । रक्सी चुरोट खानुभएन । मसालेदार चिल्लो खानुभएन । दसैं मनाउँदा रमाइलो गर्दा शरीरलाई पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । ग्यास्ट्रिकको पहिलेदेखिको समस्या हो भने नियमित औषधि खानुपर्‍यो । दसैंको समयमा खानपानमा ध्यान दिइएन भने समस्या झनै बल्झिन सक्छ । सकेसम्म लामोसमयसम्म भोकै बस्नुहुन्न । धेरैबेर भोको बस्दा पेटमा एसिड बनिराखेको हुन्छ त्यो एसिडले नै घाउ बनाउँछ । स्वादको पछि पर्नुभन्दा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं ।
खानपिनले सानो आन्द्रामा संक्रमण हुने, झाडापाखला लाग्ने, फुड प्वाइजन आदि गराउन सक्छन् । एकदम पेट दुखेमा, उल्टी आएमा, अमिलो पानी आएमा, दिसा कालो गएमा तुरुन्त अस्पताल गइहाल्नुपर्छ ।
यसबाट बच्न जोखिम कारकलाई कम गर्नुपर्छ । धेरै मसालेदार खानुभएन । सन्तुलित भोजन गर्नुपर्‍यो । दसैंमा खानपिन धेरै प्रकारका हुन्छन् । मसालेदार हुन्छन् । मासुसँगै अरु तरकारीहरु पनि खाने गर्नुपर्छ । धेरै पिरो मसाला खाादा पेटमा गएर त्यही बस्छ अनि घाउ बनाउन सक्छ ।
(त्रिवि शिक्षण अस्पतालका जीआई सर्जन डा. विष्णुप्रसाद कँडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७८ २०:१५